★မြန်မာ့အလင်း★: တောင်းတဲ့ဆုမပြည့်ရင် Allah ကို ကျေးဇူးတင်ပါ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်
တောင်းတဲ့ဆုမပြည့်ရင် Allah ကို ကျေးဇူးတင်ပါ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်
စဉ်းစားဥာဏ်ရှိမယ်၊ လူစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ကနေ အမြန်ထွက်ခွာကြပါတယ်။ အထက်ကဗီဒီယို ဖန်တီးသူကတော့ စဉ်းစားတတ်တယ်။ လူစိတ်ရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ကို စွန့်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူအချင်းချင်း မေတ္တာထားဖို့သာ အရေးကြီးကြောင်း သူရဲ့ဗီဒီယိုမှာ တင်ပြပုံက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်ကုလားများအနေနဲ့ သူ့လိုပဲ good muslim ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေတုံးလား? အဲဒါဆိုရင် သတိထားနော်။ အဲဒီဆုတောင်းသာ ပြည့်သွားရင် သိပ်တော့ မကောင်းဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် မိုဟာမက်ဟာ မွတ်ဆလင်ကောင်း တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ မိုဟာမက်လိုပြုမူနေထိုင် ကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင် အကြီးအကျယ် အရှက်ကွဲပြီး ဒုက္ခများမှာပါ။ ကျွန်ကုလားတွေမှာ ကွဲစရာအရှက်မရှိတဲ့အတွက် အရှက်ကွဲမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခများမယ့်အရေးတော့ စိုးရိမ်သင့်ပါတယ်။ မိုဟာမက်လို ကလေးငယ်ကို တဏှာရူးမယ်ဆိုရင် ဖိနပ်ကိုခွေးချေးသုတ်ပြီး ပါးပိတ်ရိုက်တာခံရမယ်။ (လူချေးနဲ့မတန်လို့ ခွေးရဲ့ချေးကို ဖိနပ်မှာသုတ်ပြီး ရိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်) မိုဟာမက်လို မုဒိမ်းကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ထောင်နန်းစံရမယ်။ မိုဟာမက်လို နှာဘူးကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိန်းမတွေက ထမိန်ကို သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ အုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ မိုဟာမက်လို သူခိုးဆိုရင်တော့ လမ်းလယ်ခေါင်မှာ ဆွမ်းကြီးလောင်းခံရမယ်။ မိုဟာမက်လို ဓါးပြဆိုရင်တော့ ရဲက ကောင်းကောင်းကို သမမှာပဲ။ မိုဟာမက်လို လက်ကြောမတင်းလို့ မုဆိုးမကြီးတွေကို သိုက်တူးမယ်ဆိုရင်တော့ လူမလေး ခွေးမခန့်ဖြစ်မယ်။ မိုဟာမက်လို လူသတ်သမားဆိုရင် ကြိုးစင်တင်ခံရမှာပဲ။ ဗီဒီယိုထဲကလူကတော့ သူ့ဆုတောင်းတွေမပြည့်လို့ Allahကို စိတ်နာတယ်ဆိုပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူအပါအ၀င် မင်းတို့တွေဟာ. . . good muslim ဖြစ်ဖို့ တောင်းတဲ့ဆုကြီးမပြည့်တာ allahကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။ အဲဒါအတွက် alhamdulillahလို့ အော်လိုက်ပါ။ allahထံ ဆုတောင်းမပြည့်တိုင်း မိမိကိုယ်ကိုပဲ အပြစ်တင်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေလဲ good muslim မဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို ကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်
အခုဗီဒီယိုထဲက မွတ်ဆလင်ဟောင်းကြီးဟာ ကျွန်ကုလားတွေ သိပ်ပြီးအထင်ကြီးတဲ့ အာရပ်စကားကို ကောင်းကောင်းပြောတတ်ပါတယ်။ အဲဒီမွတ်ဆလင်ဟောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အယူအဆလေးတွေနဲ့ တင်ပြပုံကို မြန်မာပြည်ဖွား ကျွန်ကုလားများ နားထောင်လို့ လက်ခံစဉ်းစားနိုင်ပါစေ။ ယုတ်ညံ့တဲ့မွတ်ဆလင်ကို စွန့်ခွာရင် လက်ကမ်းလို့ ကြိုဆိုပြီး။ တန်းတူထားဆက်ဆံပါမယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် လူအချင်းချင်းတန်းတူထား မဆက်ဆံဘူး၊ လူမျိုးရေးနဲ့ အသားအရောင်ခွဲခြားတယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆုံးမချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်သလိုဖြစ်နေလို့ပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 11:54 AM